” အချစ်ရေး ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေ ကို ချပြလာတဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်း” – Let Pan Daily
” အချစ်ရေး ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေ ကို ချပြလာတဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်း”
ပရိသတ်ကြီးရေသဇင်နွယ်ဝင်း ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေထဲကတစ်ဦးပါ။ မင်းသမီးတွေနီးနီးကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ပါ။ ခုရက်ပိုင်းမှာလည်း အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ သဇင်နွယ်ဝင်း ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် သဇင်နွယ်ဝင်း ကတော့ပြန့လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့် အတိအငျပြောခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင်ဇာနွယ်ဝင်းရဲ့ ချစ်သူကဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီလို့ဆိုရမှာပါနော်။ နှစ်အချိန်အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ဒီနေ့မှာ Datingပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကို” သူအရမ်းစားတယ်!!”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်းနဲ့ dateလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုသူမရဲ့ချစ်သူက တင်လာခဲ့တာပါ။
သူတို့စုံတွဲလေးကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူမတို့စုံတွဲပြန်အဆင်ပြေသွားတာကို သဘောကျကျေနပ်ကာ အားပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Nyan Lynn Naing
ပရိသတျကွီးရသေဇငျနှယျဝငျး ကတော့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့အောငျမွငျတဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူတှထေဲကတဈဦးပါ။ မငျးသမီးတှနေီးနီးကို ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးခံရသူတဈယောကျပါ။ ခုရကျပိုငျးမှာလညျး အစီအစဉျတငျဆကျသူ သဇငျနှယျဝငျး ရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျပွီးဖျောပွခဲ့တာကွောငျ့ သဇငျနှယျဝငျး ကတော့ပွန့လညျဖွရှေငျးခဲ့ပမေယျ့ အတိအငပြွောခဲ့တာမြိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနမှေ့ာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ မေးခှနျးတှကေို သငျဇာနှယျဝငျးရဲ့ ခဈြသူကဖွရှေငျးပေးလိုကျပွီလို့ဆိုရမှာပါနျော။ နှဈအခြိနျအကွာကွီး လကျတှဲခဲ့တဲ့သူတို့နှဈဦးကတော့ ဒီနမှေ့ာ Datingပွုလုပျခဲ့ကွောငျးကို” သူအရမျးစားတယျ!!”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သဇငျနှယျဝငျးနဲ့ dateလုပျဖွဈခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုသူမရဲ့ခဈြသူက တငျလာခဲ့တာပါ။
သူတို့စုံတှဲလေးကို ခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေတော့ သူမတို့စုံတှဲပွနျအဆငျပွသှေားတာကို သဘောကကြနြေပျကာ အားပေးနတေဲ့သူတှအေမြားကွီးပါပဲနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
အလနျးစား ပုံစံလေး နဲ့ အပီပွငျ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ ရှငျယှနျးမွတျ ရဲ့ ဗီဒီယို
ကွိုးတဈခြောငျး ဖကျရှငျ နဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေးပျေါလှငျ အောငျလှ လှနျးနတေဲ့ မျောဒယျလျ ခြိုမဒီသှငျ
အရမ်းကို မိမိုက်လွန်း နေပြီး ဆက်ဆီ ကျလွန်းနေတဲ့ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ အယ်လာ
မိမိုကျလှနျး တဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ ဆကျဆီ ကလြှနျးနတေဲ့ ရှစေငျ ပုံရိပျမြား